Soo adigii Urursuge ahaa, goormaad noqotay reerkaad sheeganayso | allsanaag
Soo adigii Urursuge ahaa, goormaad noqotay reerkaad sheeganayso
Haddii wasiirkii Isaaq uu sheeganayo inuu ka soo jeedo Warsangeli soo lama oran karo websityada magaca magaalooyinka Maakhir wataana iyagana Isaaq ayaa qora.
Ahmed Ali Shire, Waa nin kasoo jeeda Beesha Isaaq , Habar Yoonis Urursuge, Muuse Ismail, waana wasiirul dawlihii hore ee Caafimaadka dawladda SNM xilligii Riyaale Horjoogaha ka ahaa.
Maanta Axmed Cali Shire, waxa loo tababaray inuu sheegto beesha Warsangeli , si uu u marin habaabiyo Bulshada Soomaaliyeed iyo reer Maakhir. Degaan ahaan wuxuu sheegtay inuu ka soo jeedo Badhan si wiilka Dhahar iyo Xingalool joogaa u amino inuu yahay reer Makhir.
Hadaba umadda reer Maakhir waxaan uga digaynaa websityada magacyada magaalooyinka reer Maakhir wata oo SNM buunbuuniyaa in iyaguna yihiin kuwo ay qoraan Axmed Cali Shire iyo kuwa la mid ah
Niman dadkii dhintay qarniyo ka hor xabaalaha ka soo faganaya si ay uga beenn sheegaan miyaa u daahaya inay beel kale sheegtaan. Weriyuhu waa ogyahay beesha uu ka soo jeedo Axmed Cali Shire. Laakiinse dhaqan ayeey u noqotay inay wax kasta ka been sheegaan xitaa dhalashadooda.
← Geedi oo la kulmay jaaliyadda Maakhir ee Kuweit Muuse Biixi Ayaa na Dhacay →